Maxay Farmaajo ugu dhigantahay guusha Senotor Muuse Suudi Yallaxoow? | XAL DOON
Home NEWS Maxay Farmaajo ugu dhigantahay guusha Senotor Muuse Suudi Yallaxoow?
Maxay Farmaajo ugu dhigantahay guusha Senotor Muuse Suudi Yallaxoow?
Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa dib loogu doortay kursiga Aqalka Sare ee baarlamanka Soomaaliya ee uu hadda ku fadhiyo, doorasho ka socoto magaalada Jowhar.
Muuse Suudi Yalaxow ayaa ka guuleystay Axmed Xasan Caddow (Axmed Daaci), isaga oo helay helay 55 cod, halka Axmed Daaci uu ka helay 43 cod. Doorashada ayaa waxaa codeeyey 98 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada HirShabeelle
Kursigan ayaa ka mid ahaa kuraasta ugu loolanka adag, waxaana sida ka muuqata codadka ay ka heleen Muuse Suudi iyo Axmed Daaci dhacay tartan adag.
Xildhibaanada HirShabeelle ayaa weli fadhiya, waxaana lagu wadaa inay doortaa caawa laba kursi oo kale oo ka mid ah Aqalka Sare.
In Muuse Suudi soo baxo waxa ay ka dhigantahay fashilka Farmaajo, maadaama Muuse ahaa nin aad u daneeyo in uu ka hortago khalaadka Farmaajo.
Khudbaddii uu shalay ka hor jeediyay xildhibaannada baarlamaanka ee maamulkaas ayuu kusoo gaabiyay; “Wax aan soo qabtay ma aqaanno, ,a ii ,iisaanna, sanduuqa dhalada ah ayaan ka arki doonaa, wax aan qaban doonana ma ogi, wixi Alle igu aaddiyo ayay noqon doonaan. Haddii aan xiulka u qalmo iigu celiya, haddii aad i dhibsateenna iga reeba.”
Ilaa afar siyaasi ayaa u xusul duubayay in ay meesha ka saaraan Yalaxoow, oo afartii sano ee lasoo dhaafay Hirshabeelle ku malatayay Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Cabdullaahi Sheekh Xasan, Dr Xasan Cadaay Cali iyo Axmed Xasan Cadoow ayaa ka mid aha, waxaana ay shalay jeediyeen khudbadaha ay xildhibaannada baarlamaanka Hirshabeelle uga dalbanayaan in ay codadkooda siiyaan.
Balse Muuse ayaa caawa kursigaas oo si wayn loo hadal haayay ku soo baxay.